I-GPS033W - Ukubukwa kwe-GPS okungangenwa ngamanzi kwezingane ezisencane nezingane ezine-Autism - Whatsapp Video Call Function (OKUSHA) - Izixazululo ze-OMG
I-GPS033W - Ukubukwa kwe-GPS okungangenwa ngamanzi kwezingane ezisencane nezingane ezine-Autism - Umsebenzi Wekholi Yevidiyo yeWhatsapp (OKUSHA)
Izingane ezine-Autism nezinye izidingo ezikhethekile zingangabi ngamazwi futhi zingaba nesikhathi esinzima sokusebenzisana nabantu. I-OMG GPS Tracker yisisombululo sokuqapha esenzelwe abazali be-autism. Lapho ingane ene-Autism izulazula, umzali angavele abheke indawo ku-App elandwe ku-Smartphone. Asikho isidingo sokuqala ukubiza amaphoyisa noma omakhelwane bezama ukuthola ingane elahlekile.
Ngosizo lobuchwepheshe be-GPS la mawashi ayakwazi ukutshela indawo yengane ngezinga elimangalisayo lokunemba. Usebenzisa i-App ku-smartphone yakho, mane ukhiphe imephu futhi uzokwazi ukubona indawo eqondile yengane.
Amawashi nawo angathola imilayezo yezwi, okusho ukuthi abazali bangarekhoda umyalezo wezwi bese bezolile bacele ingane ene-autistic ukuthi ibuye ekhaya.
Le divayisi isebenza njengefoni ephathekayo, ikuvumela ukuthi ushayele ingane bese ubona kancane ukuthi ikuphi.
Kunezinye izici eziningi ezinhle eza nale mishini, ukuqinisekisa ukuthi izingane zivikelwe ngokuphelele ngaso sonke isikhathi. Ezinye zazo zifaka:
Inkinobho yezimo eziphuthumayo ye-SOS, ingane engayisebenzisa uma ingatholakali; Kunezinombolo ezisethwe ngaphambilini ezizokwaziswa uma le nkinobho icindezelwa.
Isiteshi sokuxhumana esinezindlela ezimbili esivumela abazali ukuthi baxhumane nengane futhi bayicele ukuthi ingasuki endaweni yamanje. Endabeni yengane ye-Autistic, umsindo wezwi elijwayelekile wenele ukudala ukuzola, futhi abanye bangafika kuye kalula.
Ukufakwa uthango ngesinye isici kubaluleke kakhulu endabeni yengane ye-Autistic. Lokhu kuvumela umzali ukusetha umngcele lapho ingane kufanele ihlale khona. Uma ingane idlula ngale komngcele, kuthunyelwa isexwayiso ocingweni lomzali.
I-GPS + AGPS + LBS + WIFI Indawo kumephu
I-APP yeselula noma i-PC GPRS yesikhulumi, kokubili indlela yokulawula i-watch.
I-GPRS real-time ukuthola, ukulandelela kanye nokuqapha (Care Care)
Ikholi yefoni emibili
Izingane zakuqala imfundo
Ucingo lwe-SOS oluphuthumayo
Izixwayiso zebhethri ephansi
screen Isibuko se-IPS
Buka i-strap I-silicon strap
Color I-Pink, i-blue
Usayizi (Mm) 232 * 42 * 17mm
Hlala ULINDILE 1-3days
Isikhathi sokukhuluma 4 amahora
Uhlobo lwebhethri I-Class A ye-polymer ibhethri evuselelekayo
screen Uhlobo I-IPS
Usayizi 1.4 ''
CTP Ukuthinta kwe-TFT I-CTP TFT touch
WiFi Amaprosesa asekelwe
Umsindo ring Yebo
Somlomo yebo isikhulumi sekhwalithi ye-0916high
I-Mic-phone yebo 4.0 * 1.5 umakhalekhukhwini
Nokho, Idokodo le-earphone CHA
Idokodo lokushaja Ukushaja magnetic
Slot ikhadi slot I-Nano SIM
Ikhamera Yes 30W
inzwa I-G-inzwa Yebo
Susa ukutholakala Inzwa yokukhanya CHA
Izincwajana zemininingwane Antenna Ama-antenna we-GSM ashumekile
Inethiwekhi / amaqembu GSM 850 900 1800 1900
WCDMA I-B1 B2 B5 B8
FDD-LTE I-B1 B3 B5 B7 B8
I-TDD-LTE I-B38 B39 B40 B41
Indawo yebalazwe GPS Yebo
Ulwazi lokubuka Isithonjana sekholi yevidiyo ngayinye Yebo
Ibhuku lefoni YEBO (inombolo yefoni yezihlobo ze-10)
App IOS + Android Izinhlelo ze-Android ku-Google Play Ikholi yevidiyo Yebo
Ukuxhumana okubili indlela Yebo, inombolo yokuphazamisa engaziwa
Ukuqapha kwezwi Yebo
Isikhathi sokuphumula Ukulungiselelwa kwezincwadi
I-geo-fence I-3 iyatholakala
isithombe layisha isithombe sesithombe esitholakala ku-ikhamera noma isithombe se-albhamu
Isexwayiso se-alamu I-SOS nebhethri eliphansi, uthango lwe-Geo
sezomlando Idatha eyi-1 yomlando iyatholakala
Dlala emuva ok ukudlala umzila wemlando
Ukunemba I-LBS, i-100-500meter, i-WIFI, i-30-50meter, i-GPS 5-10meter
Ukuqapha isimo sebhethri Yebo
Isikhathi esisebenzayo nge-intanethi Yebo
Ukubuka okuphelele kwe-27859 Ukubuka kwe-1 Namuhla